.သမီးလေးရဲ့ အနုပညာလှုပျရှားမှုတခုကို ပရိတျသတျတှထေံဝမျးသာအားရ ပွောပွ အသိပေးလာတဲ့ ဒါဒါရဲ့မိခငျ ဒျေါစိုးကွညျဖွူ ..😍😇 မမေအေရမျးဝမျးသာပါတယျတဲ့ 😇. – Askstyle
.သမီးလေးရဲ့ အနုပညာလှုပျရှားမှုတခုကို ပရိတျသတျတှထေံဝမျးသာအားရ ပွောပွ အသိပေးလာတဲ့ ဒါဒါရဲ့မိခငျ ဒျေါစိုးကွညျဖွူ ..😍😇 မမေအေရမျးဝမျးသာပါတယျတဲ့ 😇.
သမီးလေးရဲ့ အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတခုကို ပရိတ်သတ်တွေထံဝမ်းသာအားရ ပြောပြ အသိပေးလာတဲ့ ဒါဒါရဲ့မိခင် ဒေါ်စိုးကြည်ဖြူ ..
သရုပ်ဆောင် မင်းသမီးချောလေး စိုးမြတ်နန္ဒာကတော့ အကယ်ဒမီထူးချွန်ဆုတွေ ရရှိထားပြီး ဇာတ်ကားတိုင်းကိုလည်း ပီပြင်ပိုင်နိုင်စွာ သရုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ ပြည်သူချစ် အနုပညာရှင်တစ်ဦးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အနုပညာအလုပ်တွေကို ဆယ်စုနှစ်တွေများစွာလုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီးနောက် လက်ရှိအချိန်မှာတော့ သူမရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ပိုးထည်လုပ်ငန်းကိုသာ ဦးစီးလုပ်ကိုင်နေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
အခုမှာလည်း ပရိသတ်တွေ ဝမ်းသာသွားစေမယ့် သတင်းလေးကို ဒါဒါရဲ့ မိခင်ကပြောပြလိုက်ပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
မကြာသေးခင် မိနစ်ပိုင်းလောက်ကလည်း အန်တီစိုးကြည်ဖြူရဲ့ လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာတွင် အချိန်အကြာကြီးအနုပညာအလုပ်တွေနဲ့ဝေးကွာခဲ့ရာမှပရိသတ်တွေရဲ့တောင်းဆိုမှုကြောင့်ဇာတ်ကားတွေပြန်လည်ရိုက်ကူးတော့မယ့်သမီးလေးရဲ့အကြောင်းကို ပြောပြလာတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အန်တီစိုးကြည်ဖြူကလည်း ” အော်, အခုတော့သမီးငယ်လေး ပြန်လှုပ်ရှားပြီ မေမေဝမ်းသာတယ်သမီး ” ဆိုပြီး ရေးသားထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဒါကတော့ လတ်တလောမှာတော့ နေပြည်တော်တွင် (76) နှစ်မြောက် တပ်မတော်နေ့ အထိမ်းအမှတ်ဂုဏ်ပြုဇာတ်ကားကို အခြားနာမည်ကြီး အနုပညာရှင်များစွာနဲ့ ရိုက်ကူးနေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားရဲ့နာမည်ကတော့ ” ကြယ်နှင့်အတူ” လို့ အမည်ရပြီး ပရိသတ်တွေလည်း မတွေ့ရတာကြာပြီဖြစ်တဲ့ ဒါဒါရဲ့သရုပ်ဆောင်တာတွေကို မြင်တွေ့ရမှာဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အားလုံးလည်း သိရှိဝမ်းသာနိုင်အောင် ဒီသတင်းလေးကိုတစ်ဆင့် ပြန်လည်ကူးယူတင်ဆက်ပေးလိုက် ရပါတယ်နော်။
သမီးလေးရဲ့ အနုပညာလှုပျရှားမှုတခုကို ပရိတျသတျတှထေံဝမျးသာအားရ ပွောပွ အသိပေးလာတဲ့ ဒါဒါရဲ့မိခငျ ဒျေါစိုးကွညျဖွူ ..
သရုပျဆောငျ မငျးသမီးခြောလေး စိုးမွတျနန်ဒာကတော့ အကယျဒမီထူးခြှနျဆုတှေ ရရှိထားပွီး ဇာတျကားတိုငျးကိုလညျး ပီပွငျပိုငျနိုငျစှာ သရုပျဆောငျနိုငျတဲ့ ပွညျသူခဈြ အနုပညာရှငျတဈဦးပဲ ဖွဈပါတယျ။
အနုပညာအလုပျတှကေို ဆယျစုနှဈတှမြေားစှာလုပျကိုငျခဲ့ပွီးနောကျ လကျရှိအခြိနျမှာတော့ သူမရဲ့စီးပှားရေးလုပျငနျးတဈခုဖွဈတဲ့ ပိုးထညျလုပျငနျးကိုသာ ဦးစီးလုပျကိုငျနတောလညျး ဖွဈပါတယျ။
အခုမှာလညျး ပရိသတျတှေ ဝမျးသာသှားစမေယျ့ သတငျးလေးကို ဒါဒါရဲ့ မိခငျကပွောပွလိုကျပွီပဲ ဖွဈပါတယျ။
မကွာသေးခငျ မိနဈပိုငျးလောကျကလညျး အနျတီစိုးကွညျဖွူရဲ့ လူမှုကှနျယကျစာမကျြနှာတှငျ အခြိနျအကွာကွီးအနုပညာအလုပျတှနေဲ့ဝေးကှာခဲ့ရာမှပရိသတျတှရေဲ့တောငျးဆိုမှုကွောငျ့ဇာတျကားတှပွေနျလညျရိုကျကူးတော့မယျ့သမီးလေးရဲ့အကွောငျးကို ပွောပွလာတာပဲ ဖွဈပါတယျ။
အနျတီစိုးကွညျဖွူကလညျး ” အျော, အခုတော့သမီးငယျလေး ပွနျလှုပျရှားပွီ မမေဝေမျးသာတယျသမီး ” ဆိုပွီး ရေးသားထားတာပဲ ဖွဈပါတယျ။
ဒါဒါကတော့ လတျတလောမှာတော့ နပွေညျတျောတှငျ (76) နှဈမွောကျ တပျမတျောနေ့ အထိမျးအမှတျဂုဏျပွုဇာတျကားကို အခွားနာမညျကွီး အနုပညာရှငျမြားစှာနဲ့ ရိုကျကူးနတောလညျး ဖွဈပါတယျ။ ဒီဇာတျကားရဲ့နာမညျကတော့ ” ကွယျနှငျ့အတူ” လို့ အမညျရပွီး ပရိသတျတှလေညျး မတှရေ့တာကွာပွီဖွဈတဲ့ ဒါဒါရဲ့သရုပျဆောငျတာတှကေို မွငျတှရေ့မှာဘဲ ဖွဈပါတယျ။
အားလုံးလညျး သိရှိဝမျးသာနိုငျအောငျ ဒီသတငျးလေးကိုတဈဆငျ့ ပွနျလညျကူးယူတငျဆကျပေးလိုကျ ရပါတယျနျော။